Nin "rabay" in uu Soomaaliya u yimaado ku biirida Al-Shabaab oo la qabtay
Nin rabay inuu Soomaaliya u yimaado ku biirida Al-Shabaab oo la qabtay
Idd Seleman Bakari oo la qabto 29-kii July kadib xogo sirdoonku heleen ayaa la aaminsan yahay in lagu xagjireeyay magaaladda Mombasa.
NAIROBI, Kenya – Ciidanka la dirirka argagixisada Kenya ayaa xaafada Islii ee caasimada Nairobi ka qabto latuhunsane loo maleynayo in uu qorsheeyay in uu u socdaalo Soomaaliya si tababar ula soo qaato ururka Al-Shabaab.
La tuhunsanaha oo uu hoosta ka xariiqay in ay baaritaan ku bilaabeen ayuu carabka ku dhuftay in ay waydiinayaan su'aallo la xiriira cidda diiwaan-gelisay, dhaqalaaha bixineysa iyo suurtagalimada in uu xogo bixiyo.
"Baaritaanka waa mid aad u adag. Wuxuu qaadan karaa waqti badan, maxaa yeelay waxaan dooneynaa in aan macluumaad badan ka helno. Telefoonkiisa ayaan hubin ku sameyn doonaa," ayuu raaciyey hadalkiisa.
Bishaan August 6-deeda ayaa loo muddeeyay in uu kasoo muuqdo maxkamad, isagoo tan iyo waqtigaas la kulmi doona baareyaasha si ay u waydiiyaan su'aallo ku saabsan safarkiisa iyo "arrimaha kale ee ku geedaman".
Soomaali-Kenyanka iyo rakaabkiisa ayaa muddo hal saac ah waxay go'doon xoogaga gacansaarka la leh Al-Qaacida.